Mgbe ọ na-abịa na-ewere nzi foto, ndị kasị mma igwefoto bụ onye i nwere na-oge niile ie gị ama igwefoto. Smartphones n'oge na-ebu ndị kasị mma ese foto na ha na-mgbe niile. Abịa iOS ngwaọrụ e anyị ụba nke iOS ngwa maka iPhone, iPad, na iPod aka ijere nta ọ bụla nzube na mgbe ọ na-abịa na ịnweta photos, iCloud bụ ihe kasị mma n'elu ikpo okwu site Apple. Ị nwere ike ịnweta gị foto online n'oge ọ bụla na ị Mac ma ọ bụ Windows kọmputa ma ọ bụ na gị na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch. iCloud bụ nanị kasị mma e nwere nhọrọ iji nweta gị foto. Ị nanị chọrọ onye Apple ID na njikọ Ịntanetị na ị na-eme! Ịnweta foto site na iCloud bụ nnọọ mfe, na e nwere ụzọ ụfọdụ na-eme otu ihe ahụ. Isiokwu a gosiri gị otú ị nweta foto site na iCloud na anọ mfe ụzọ.
1. Iji Apple iOS Devices
Nzọụkwụ 1 Iji nweta foto na iji Apple iOS ngwaọrụ mbụ ị mkpa na-emeghe "Mwube" Site na Ihuenyo gị iOS ngwaọrụ na mgbe ahụ enweta "iCloud." Kpatụ "On / Off" ka iCloud NA na-abanye na gị kwupụtara Apple ID. Tụgharịa na Photo Stream ịhụ gị foto na iCloud na ịhụ na foto na-akọrọ ndị mmadụ na unu - Tụgharịa na Shared Photo iyi.
Nzọụkwụ 2 nzọụkwụ ọzọ bụ ẹkedori "Photos" ngwa si ​​n'ụlọ ihuenyo. Ị ga-ahụ a "Photo Stream" button na ihuenyo. Enweta na ya ẹkedori Photo Stream.
Enweta na "My Photo Stream" ịhụ foto ị na uploaded na ọ bụrụ na onye ọzọ na-akọrọ ha Photo Stream na gị, ọ ga-abụ dị na ihuenyo.
Mfe na obere usoro
Ọ dịghị data ọnwụ
2. Iji a PC
Nzọụkwụ 1: Iji jiri iCloud na gị Windows Computer, ị mbụ mkpa iji wụnye ya. Ya mere mbụ Download na wụnye iCloud maka Windows.
Nzọụkwụ 2: Mgbe ị na-eme wụnye iCloud, malite iCloud Control Panel maka Windows na-abanye na gị kwupụtara Apple User ID na paswọọdụ. Ị nwere ike ịmepụta gị ID naanị ma ọ bụrụ na i nwere ihe Apple iOS ngwaọrụ ma ọ bụ a Mac na OS X odum ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ị chọrọ onye Apple ID iji iCloud.
Nzọụkwụ 3: Mgbe abanye njirimara gị id na paswọọdụ, pịa "Photo" igbe aka Photo na ihuenyo. Pịa "Nhọrọ" bọtịnụ họrọ Photo Stream nhọrọ. Echefukwala enyere ndị Shared Photo iyi nhọrọ ịhụ photos-akọrọ ndị ọzọ na gị.
Mfe mmekọrịta gị data na kọmputa.
N'otu ebe ruo niile data.
3. Iji a Mac
Nzọụkwụ 1: Firstly, họrọ "System Mmasị" site Apple menu na gị Mac wee pịa "iCloud." Pịa "Photo Stream" checkbox na ihuenyo na pịa "Nhọrọ" iji jide n'aka na "Photo Stream" na "Shared Photo iyi" na-ma nyeere.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a ọ bụ oge ẹkedori ma iPhoto ma ọ bụ Aperture. Pịa "iPhoto" ma ọ bụ "Aperture" na elu nke ihuenyo na họrọ "Mmasị." Ugbu a, pịa "Photo Stream" taabụ ma họrọ nhọrọ nke "Photo Stream" na "Shared Photo Stream."
Nzọụkwụ 3: Iji hụ gị Photo Stream photos, họrọ "Photo Stream" site na isi window na ma iPhoto ma ọ bụ Aperture ozugbo ị ahazi ya.
Easy ka mmekọrịta data
iCloud bụghị a zuru ezu faịlụ syncing ọkachamara edi akwa mgbe ọ na-abịa na-ebufe foto
4. Iji Wondershare Dr. Fone maka iOS iji nweta ehichapụ photos
Wondershare Dr.Fone Maka iOS (iPhone Data Recovery) bụ a keukwu data mgbake ngwọta dị na ahịa. Ugbu a mfe naghachi gị furu efu data kpọmkwem site iOS ngwaọrụ ma ọ bụ weghachite backups si iCloud ma ọ bụ iTunes. Ọ bụ nke ukwuu dakọtara na ọhụrụ iOS 9, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPad Air 2 na ndị ọzọ. Ka ịghọta otú ọ ga-eji iji weghachite faịlụ site na iCloud ndabere.
Nzọụkwụ 1. Họrọ Iweghachite ọnọdụ
Run Wondershare Dr.Fone maka iOS ma họrọ mgbake mode nke "naputa site na iCloud ndabere faịlụ" site n'elu. A ọhụrụ window ga-apụta na-aba gị iCloud akaụntụ na paswọọdụ nbanye. Ozi gị na-ukwuu nwetara na-dịghị ihe ndekọ na-ebi wee site Wondershare.
Nzọụkwụ 2. Download iCloud ndabere File
Ozugbo ị nbanye iCloud, usoro ihe omume ga-enwe ike ịhụ niile iCloud ndabere faịlụ na akaụntụ gị. Họrọ onye na ebe ị na-chọrọ iji naghachi data na pịa "Download" bọtịnụ.
Na mmapụta window, ị nwere ike họrọ ụdị nke faịlụ ị ga-achọ ka download. Nke a ga-azọpụta ndị na nbudata oge nke iCloud ndabere faịlụ. Mgbe ahụ ị pụrụ iṅomi iCloud ọdịnaya. Pịa "iṅomi" button iji malite usoro ka ọ na-ewe obere oge mezue usoro.
Nzọụkwụ 3: Preview na-agbake gị data si iCloud ndabere File
Ozugbo Doppler bụ zuru ezu, ị nwere ike ịhụchalụ fọrọ nke nta niile data na iCloud ndabere faịlụ gụnyere gị kọntaktị, ozi, foto, na ọzọ. Ego na nne Mmetụta ihe ị chọrọ na pịa na "Naghachi button" na-azọpụta ha na kọmputa gị. Kọntaktị gị, ozi, na ndetu ga-natara gị iOS ngwaọrụ ozugbo gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka ma ọ bụrụ na ha na-ejikọrọ na kọmputa gị. Jikọọ gị iDevices na iji eriri USB n'oge mgbake usoro.
Mfe nzọụkwụ ka mmekọrịta na weghachite iPhone na iCloud
> Resource> iCloud> anọ mfe ụzọ iji nweta iCloud photos